Ny tapany ambony tadiavinao dia azo raisina ihany amin'ny farany. Mikasa ny hanorina trano amin'ity tanàna ity ato ho ato? Azo antoka fa tsy misy toerana tsara kokoa noho Allama Iqbal Town. Miaraka amin'ireo fotodrafitrasa avo indrindra misy amin'ny vidiny mirary 33 000 Rs, ity dia fotoana iray tsy maintsy araraotinao. Mahazoa ny ampahan'ny fiainana an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny fananana ao Lahore. Miaina am-pilaminana sy ahazoana aina miaraka amin'ity trano ity. Manararaotra mahita ny fananana tongotra 2250 Kavina tsara indrindra ho anao sy ny fianakavianao. Endri-javatra fananana toy ny manaraka. Ilaina ny efitrano fanaovana sary toy izao raha toa ka misy fiaraha-mikorana mahazatra ataonao matetika. Ny efitrano fivavahana lehibe ao amin'ny faritra avo dia afaka manamora ny olona hiaraka hivavaka. Ny efitrano fanasan-damba dia toetra mampiavaka ny Upper Portion ary afaka mandray soa avy amin'izany ianao! Ity trano ity dia manana efitrano malalaka malalaka ahafahan'ny fianakavianao mifanakalo hevitra sy mijery fahitalavitra. Angony ny fianakavianao manodidina ary zarao ny antsipirian'ny andronao mandritra ny sakafo hariva ao amin'ny efitrano fisakafoana izay misy ny tranonao manaraka. Ny efitrano vovoka ao amin'ny trano fonenana dia azo ampiasaina ho efitra fandroana fanampiny. Mila fampahalalana bebe kokoa! Antsoy izahay.